Kaindu: Abadlali beHighalnders Kabazimisele Ukuthethiswa Emdlalweni WangeNsonto
BULAWAYO — Umqeqetshi weqembu lenguqu ele Highlanders uKelvin Kaindu uthi abadlali bakhe kuzamele bezimisele ukumelana lenhlamba ezizavela kubasekeli bamanye amaqembu emdlalweni weqembu lakhe lele Harare City ozaqhutshelwa enkundleni ye Rufaro Stadium ngeNsonto.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele Triangle obusemagumeni ngoLwesithathu uKaindu uthe umdlalo weqembu le Bosso lele Harare City uyabe ungatshiphanga njalo iqembu lakhe lilakho ukubhekana lobunzima obuzavela kubabukeli abangabasekeli bamanye amaqembu.
UKaindu uqhubekele phambili ethi umbango wokuphakamisa inkezo ye Castle Premiership usasenzima ngoba kulamaqembu afika phose amane alakho ukuphakamisa inkezo ekupheleni kwesizini.
Lokhu kusekelwe yintathelizindaba esebenzela elinye lamaphephandaba ako Bulawayo umfoka Madlenya.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kulimpelaviki amaqembu azadlala ngokulandelayo; Ngomgqibelo kuzakuba lomdlalo owodwa ozakuba phakathi kweqembu le Motor Action elizadlala lele Caps United enkundleni ye Rufaro.
Eminye yonke imidlalo izadlalwa ngensonto njalo le ngegoqela ozakuba phakathi kwe qembu le Chicken Inn lele Dynamos ozakuba seMagumeni eBarbourfields, iBlack Mambas izemukela i Tipple B eMorris Depot, amaqembu ezimbamgodi i How Mine le FC Platinum zizangqikilana enkundleni yeLuveve, iqembu le Buffaloes lizadlala lele Monomotapa ngase Sakubva kuthi iqembu le Black Rhinos lizemukela ele Hwange enkundleni ye Rimuka, ikanti iqembu le Shabanie Minelizahlangana lele Triangle ngase Maglas.